Online Burma Library > Reading Room > Blogs > Blogs in Burmese
> Blogs in Burmese
Burma/Myanmar Agriculture blogs
Title: Network for Environment and Economic Development - Burma (NEED-Burma) မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Description/subject: Blog of the Network for Environment and Economic Development - Burma (NEED-Burma) မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကွန်ယက် ၏ ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။
Source/publisher: Network for Environment and Economic Development - Burma
Description/subject: ဇာဂနာရဲ့ ပျက်လုံးများ အကြောင်းနဲ့ အငြိမ့် အကြောင်းများ၊ အရေးယူခံရမှုများ ...
Title: Ainmat.com အိပ်မက်
Description/subject: Group Blogs: 356 Authors until (21 Aug 2012). Essay, Poems, Articles "Myanmar Language lovers" ..... ရသစာစီကုံး၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး (မြန်မာစာချစ်သူများအတွက်)။ ဤဘလော့ဂ်တွင် ၂၀၁၂ ခု သြဂုတ် ၂၁ ရက်နေ့ အထိ စာရေးသူ (၃၅၆) ယောက် ရှိပါသည်။
Title: JP News Burmese Documentary မိုးသောက်ကြယ်
Description/subject: Poems, articles, general: Based in Japan... ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ အထွေထွေ။ ဂျပန်ပြည်တွင် အခြေစိုက်သည်။
Title: MoeMaKa မိုးမခ
Title: yewintthu.co.cc ရဲဝံ့သူ
Description/subject: Arts & Politics, အနုပညာ နှင့် နိုင်ငံရေး
Title: Nyein Way ငြိမ်းဝေ
Description/subject: Poems... ကဗျာ
Title: Aung Tha Nge အောင်သာငယ်
Title: 99 Snay နိုင်းနိုင်း စနေ
Description/subject: Translated articles from Chinese language to Burmese ... ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးများ
Title: Kaung Kin Ko ကောင်းကင်ကို
Description/subject: Politics, Ideology, Poems ... အတွေးအခေါ်၊ နိုင်ငံရေး၊ ကဗျာ
Title: Burma Today ယနေ့မြန်မာ
Description/subject: News of Myanmar, News of Myanmar community, articles, poems, photos..... "အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၊ မြန်မာစာပေ၊ အနုပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ရေရှည် တည်တံ့စေရန်၊ မြန်မာစာပေ၊ အနုပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများကို မျိုးဆက်များအလိုက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန်၊ မြန်မာမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းများ ပိုမို ရင်းနှီးမှု ရရှိစေရန်၊ မြန်မာပြည်သူများ အသိအမြင်၊ အတွေးအခေါ် ကျယ်ပြန့် ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ယနေ့မြန်မာ (Burma Today) အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မြန်မာသတင်း၊ မြန်မာမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းသတင်းများနဲ့ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ စာပေအနုပညာ၊ ဓါတ်ပုံ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြလျက် ရှိပါတယ်။"
Author/creator: U Myint Hlaing ဦးမြင့်လှိုင်
Burma/Myanmar Buddhism blogs
Title: Lankamsma(MSMA), သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ
Description/subject: Myanmar Monks students in Sri Lanka established this site. (Buddhism, Politics and general) သီရိလင်္ကာရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များ တည်ထောင် သော ဆိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ (ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၊ နိုင်ငံရေး နှင့် အထွေထွေ)
Burma/Myanmar Computer/ICT blogs
Title: Auto Cad for Myanmar မြန်မာများအတွက် အော်တိုကက်
Description/subject: Computer technologies (especially in Auto Cad) & Scholar
ကွန်ပြူတာ နည်းပညာများ(အော်တိုကက် အထူး) နှင့် ပညာတော်သင်
Title: Nyi Nay Min (Technology) ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
Description/subject: Computer Technology... ကွန်ပြူတာနည်းပညာ
Title: Burma ICT Watch
Description/subject: Information and Communication Technology (ICT) implementation and empowering in Burma
Author/creator: Tun Tun Aung
Title: Nyi Nyi Myanmar
Description/subject: Information and Telecommunication Technology blog
Description/subject: Computer Technology... ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ
Title: NYI LYNN SECK 18+ DEN (ညီလင်း ဆက် 18+DEN)
Description/subject: "About Me: Myanmar Pro-Blogger, freelance Graphic Designer, Photographer, Writer, History & Language Researcher, Social Activist, and Web addict. Doing projects relating with Myanmar Language and trying to build up Resource Center. Beside, the two Projects; National Biographies and Myanmar Wordnet are in progress. Currently volunteering as EC in MCPA and live and run in Yangon, Myanmar." မြန်မာ ဘလော့ဂါ ညီလင်းဆက်၊ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းနာ၊ စာရေးဆရာ၊ ဓါတ်ပုံဆရာ၊ သမိုင်း နှင့် ဘာသာစကား သုတေသီ၊
Author/creator: Nyi Lin Seck
Title: MY BLOG ( MYANMAR ) COMPUTER SOFTWARES AND MISCELLANEOUS THINGS
Description/subject: Many software are uploaded in this blog ဆော့ဝဲ အမြောက်အများ ဤဘလော့ဂ် တွင် upload တင်ထားသည်။
Author/creator: KO AUNG . KAWLIN
Description/subject: software for computer... Android phone... Tablet computer... programming software...
Date of entry/update: 21 October 2012
Burma/Myanmar Cooking blogs
Title: lulucooking.blogspot.com/ မေတ္တာရပ်ဝန်း မီးဖိုဆောင်
Description/subject: Myanmar style Cooking blog... မြန်မာဟင်းချက်နည်း ဘလော့ဂ်
Date of entry/update: 30 October 2012
Burma/Myanmar Democracy blogs
Title: Nik Nayman's blog နစ်နေမန်း
Description/subject: Politics... နိုင်ငံရေး
Source/publisher: Nik Nayman
Alternate URLs: http://niknayman.wordpress.com/
Title: We Fight We Win မိုးသီးဇွန် ဘလော့ဂ်
Description/subject: Moe Thee Zone's Blog (Politics, general articles) ... မိုးသီးဇွန် ဘလော့ဂ် (နိုင်ငံရေး၊ အထွေထွေ ဆောင်းပါး)
Burma/Myanmar Ebooks blogs
Title: Myanmar E-Books (Burmese) မြန်မာစာအုပ်များ
Description/subject: Every year,
Reporters Without Borders and the Burma Media Association
reward Burma’s best bloggers. Thousands of Burmese
netizens voted for their favourite blogs, and in late
February 2010 in Chiang Mai, Thailand,adozen of them
receivedaprize for the best Burmese blogs. Myanmar
E-Books (http://burmesebooks.wordpress.com) was voted
the best general category blog. The prize for the best
news blog went to The Power of Fraternity: (http://photayokeking.org)[the latter seems to be inaccessible sometimes]
Alternate URLs: http://www.myanmarebooks.net/
Title: Eain Mat Hlaing Bookshelf အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင်
Description/subject: Myanmar ebook library... မြန်မာစာအုပ်များ
Description/subject: Most of English ebooks links did not work, but most of Burmese ebooks links are properly work. Round about 1000 ebooks exist in this site
Burma/Myanmar Economy blogs
Description/subject: This is an online market of Myanmar..... မြန်မာ အွန်လိုင်း ဈေးကွက်
Language: English/ Burmese မြန်မာဘာသာ
Date of entry/update: 13 October 2012
Title: Education - British Council -Burma
Title: Myanmar Scholar: Scholarships and Educational Informations for Myanmar / မြန်မာစကော်လာ ပညာရေး ဘလော့ဂ်
Description/subject: Scholarship... Study Abroad ..... နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် (စကော်လာ) ဘလော့ဂ်
Description/subject: Education and Teaching Methods... Students... Libraries... Personal Accounts... Question and Answers... Various Professions... Education System... Education Type... General Discussions... ပညာရေးနှင့် စာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ စနစ်၊ သုတေသနအချက်အလက်များကို ကိုးကားတင်ပြထားခြင်း... ကျောင်းသားများအတွက် စာသင်ယူရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရစေမည့်အချက်အလက်များကို ကိုးကားတင်ပြထားခြင်း... နိုင်ငံပေါင်းစုံရှိစာကြည့်တိုက်များအကြောင်း... နိုင်ငံပေါင်းစုံတွင် အဆင့်ပေါင်းစုံမှ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများ... စာဖတ်သူများ၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုသောနေရာ... နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ အလုပ်အကိုင်များအကြောင်း... နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီ၏ ပညာရေးနည်းစနစ် များ... မတူညီသောပညာရေးအမျိုးအစားများအကြောင်း... ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အထွေထွေဆောင်းပါးများ
Title: Myanmar-Teachers.blogspot.com မြန်မာကျောင်းဆရာများ
Description/subject: Quotes ကိုးကားစရာ... ကဗျာ-Poems... ကာတွန်း Cartoon... ကာယလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကစားနည်းများ... ကလေးများကဏ္ဍ Children... စာဖတ်ခန်း... ဆရာအတတ်ပညာရေး... ပညာရေးသတင်းများ... ပညာရေးသုတေသန Education Research Papers... ပညာရေးဟာသ... မူလတန်း ပညာရေး... မျက်မှောက်ခေတ် ပညာရေးအတွေးအခေါ် ပညာရှင်များ
Burma/Myanmar Environment blogs
Title: Ronan Lee blog
Source/publisher: Ronan Lee blog
Title: Shwe Gas Movement
Description/subject: This project base in Chiang Mai, Thailand. Myanmar's resources and environment issues:
Source/publisher: Shwe Gas Campaign
Alternate URLs: http://burmese.shwe.org/
Burma/Myanmar Health blogs
Title: My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ
Description/subject: Memoir in life ofaBurmese Doctor... မြန်မာ ဆရာဝန်တယောက်၏ အမှတ်တရများ...
Title: Medical Writings ဆေးပညာစာများ
Description/subject: Blogger - Dr. Tint Swe ...
Title: Mae Tao Clinic Blog
Source/publisher: "Mae Tao Clinic"
Description/subject: "About this blog: This blog is jointly written byagroup of Myanmar Public Health Professionals.
Our objectives are: To disseminate public health concepts and practices, To present contemporary international public health issues, To present and discuss public health problems of Myanmar "..." မျှဝေလိုသူများအတွက်
Title: Yamuna Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း
Description/subject: Burmese migrant clinic in India... အိန္ဒိယရောက် မြန်မာများအတွက် ဆေးခန်း
Burma/Myanmar History blogs
Title: Ma Thet Zin's Blog မသက်ဇင်ဘလော့ဂ်
Description/subject: LAST UPDATED JUNE 2009...
ကဗျာ... ခရီးသွားဆောင်းပါး... ပုဂံမတိုင်မီမြန်မာနိုင်ငံ... ပုဂံခေတ်... ပုဂံခေတ် ပျက်သုဉ်းပြီး... အဖွားပြောသောသမိုင်းပုံပြင်
Source/publisher: Ma Thet Zin's Blog
Date of entry/update: 28 January 2011
Title: AHRC Burmese-language blog (Burmese and English) အာရှ လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Description/subject: "BURMA / MYANMAR. Since Zarganar's release, ZBlog is moving intoaglobal human rights monitoring platform : political and social rights and life, including development initiatives.
At the moment, hundreds prisoners of conscience are still under the bars. FREE ALL POLITICAL PRISONNERS. NOW !"
Title: WorkersFM/ အလုပ်သမား ရေဒီယို
Description/subject: Workers and Decent Works... workers and trade unions' manual... VOA Myanmar TV News... Migrant Diary 2012... Myanmar MP3 Choices Songs... Myanmar Update News... Radio Links... အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအတွက် လက်စွဲစာမူ... မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ မိတ်ဆက်... အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်မှုအခြေခံ... လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စည်းရုံးခွင့်အား အကာအကွယ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် အမှတ် ၈၇ (၁၉၄၈)... စည်းရုံးခွင့်နှင့်စုပေါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုခွင့် ပြဌာန်းချက် အမှတ် ၉၈ (၁၉၄၉)... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား စံနှုန်းများ... လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုခြင်း... စုပေါင်းညှိနှိုင်းခြင်း မဟာဗျူဟာများ... ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ (BE-2541)... လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး သိကောင်းစရာ... လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ... လူမှောင်ခိုသယ်ပို့ခြင်းနှင့် လူကုန်ကူးခြင်း သိကောင်းစရာ... အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေခြင်း သိကောင်းစရာ... ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဒိုင်ယာရီ ၂၀၁၂
Language: Burmese မြန်မာဘာသာ
Burma/Myanmar Military blogs
Title: photayokeking.blogspot.com စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား
Description/subject: Military, News of Battles in Myanmar, Weapons of Myanmar Army..... စစ်တပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှ တိုက်ပွဲများသတင်း၊ မြန်မာစစ်တပ် လက်နက်များ...
Title: The Power of Fraternity (Burmese) စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား
news blog went to The Power of Fraternity: (http://photayokeking.
Source/publisher: The Power of Fraternity
Burma/Myanmar Movies blogs
Title: Myanmar Online Movies
Description/subject: free Myanmar Movies... free Online games.... photos... free TOEFL Test
Burma/Myanmar Muslim blogs
Title: San Oo Aung’s Weblog
Burma/Myanmar NGOs blogs
Title: Smile Scholastic and Social-Welfare Foundation (SMILE ပညာပါရမီ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်း )
Description/subject: "Smile Scholastic and Social-Welfare Foundation" is an organization that donation for education and drinking water. "SMILE ပညာပါရမီ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်း" သည် ပညာရေးအတွက်၊ သောက်ရေသန့် ရရှိရေး အတွက် ကူညီနေသော အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
Source/publisher: Smile Scholastic and Social-Welfare Foundation
Burma/Myanmar News blogs (Burmese)
Title: Thit Htoo Lwin
Description/subject: News (especially about Myanmar)
Source/publisher: Thit Htoo Lwin
Title: Irrawaddy Blog ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ်
Description/subject: News and Politics ... သတင်းနှင့် နိုင်ငံရေး
Title: The Ray of Light Journal အလင်းတန်းဂျာနယ်
Description/subject: The Ray of Light Journal Archives Site အလင်းတန်းဂျာနယ် များတစု တစည်းတည်း ဖတ်နိုင်သည်။
Burma/Myanmar Personal/General blogs
Description/subject: general articles အထွေထွေ အကြောင်းအရာများ
Title: Phoo Nu Thit ဖူးနုသစ်
Description/subject: General articles ... အထွေထွေ ဆောင်းပါးများ
Source/publisher: Phoo Nu Thit
Title: A Burmese in Africa: Soe Myint (Anaesthesia) အာဖရိကရောက် မြန်မာတစ်ယောက် - စိုးမြင့် (မေ့ဆေး)
Author/creator: Soe Myint
Title: Dr.Lun Swe's Blog
Description/subject: သတင်း... ကဗျာ... ကာတွန်း... ဆောင်းပါး... ဟာသ
... သရော်စာ... အက်ဆေး/၀တ္ထုတို... ၀တ္ထုရှည်... ပြဇာတ်
... ပေးစာ... အင်တာဗျူး... မှတ်စု... ပန်းချီ... အသံ
... ဓါတ်ပုံ... ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း... ဂျာနယ်ကဏ္ဍ... စာဖတ်ခန်း
... အမှတ်တရ... မောင်ချောနွယ်ကဗျာ... ကြေညာချက်... နှိုးဆော်ချက်
Title: Myanmar (Myanmar life, culture and People)
Description/subject: "About MML: Myanmar Life isaweblog covering Myanmar general Information, Life, People, Culture and Places via Visual and Motion"
Title: Myanmar Life Blog
Description/subject: "This is an official blog of MyanmarLife.com where you can findabit more of Myanmar life style, people, holidays and travel, music and entertainments, and related news"
Title: Ye' Yint Nge (Canada) ရဲရင့်ငယ် (ကနေဒါ)
Description/subject: မြန်မာသတင်း... ဆောင်းပါး... အတိုအထွာလေးများ... မေးမြန်းခန်း
... မှတ်သားစရာ... ဇတ်လမ်း... အမောပြေ... ဓါတ်ပုံ... ဗွီဒီယို
... ကဗျာ... ကာတွန်း... ဂျာနယ်... သီချင်း... ကနေဒါသတင်း
... ကနေဒါသွားရအောင်... ကနေဒါလူဝင်မှုဆိုင်ရာ... မလေးမေ၏စာအုပ်စင်
... အထွေထွေ... ကြေငြာချက်... ပေးစာ
Title: aungsayarpyi.blogspot အောင်စေရာပြည်
Description/subject: General articles, အထွေထွေ သတင်းဆောင်းပါးများ... (This blog was not updated since June 2009... ဤဘလော့ဂ် မှ post များ ကို ၂၀၀၉ ဇွန် လ အထိ သာ တင်ခဲ့သည်)
Title: Lu Bo is လူဗိုလ်ဟူသည်
Description/subject: politics, news and general... နိုင်ငံရေး၊ သတင်းနှင့် အထွေထွေ
Title: Nguyinpyin ငုရင်ပြင်
Description/subject: Politics, News, Novels, Poems ... နိုင်ငံရေး၊ သတင်း၊ ၀တ္တု ၊ ကဗျာ...
Title: Panglongburmese.blogspot ပန်လုံ ဘလော့ဂ်
Description/subject: A blog of Shan Herald... ရှမ်းသံတော် ဆင့်မှ တည်ထောင်သည့် ဘလော့ဂ် ဖြစ်ပါသည်။
Title: Sone Sea Yar ဆုံဆည်းရာ
Title: Khin Ma Ma Myo ခင်မမမျိုး
Description/subject: Politics, Warfare, Economy and Ideology (This is the new blog of Khin Ma Ma Myo) ... နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ အတွေး အမြင်... (ခင်မမမျိုး ဘလော့ဂ် အသစ်)
Author/creator: Khin Ma Ma Myo ခင်မမမျိုး
Alternate URLs: http://www.khinmamamyo.blogspot.com/
Description/subject: Myanmar Politics, Arts ... မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ
Title: Ahlin Yannant Journal အလင်းရနံ့ဂျာနယ်
Title: Khin Min Zaw ခင်မင်းဇော်
Description/subject: Politics, Articles, Poems နိုင်ငံရေး၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ
Title: Khin Ma Ma Myo (Old Blog) ခင်မမမျိုး (ဘလော့ဂ်အဟောင်း)
Description/subject: This is old blog of Khin Ma Ma Myo. The address of the blog was changed to the new address(http://www.khinmamamyo.info) since 2011 October. ခင်မမမျိုး ၏ ဘလော့ဂ် အဟောင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လမှ စ၍ ဘလောဂ် လိပ်စာ သစ် သို့ပြောင်းရွှေ့သွားပါသည်။
Burma/Myanmar Travel blogs
Title: Travel Consultant Of Myanmar
Description/subject: Classic... Flipcard... Magazine... Mosaic... Sidebar... Snapshot... Timeslide